किन कार्यकर्ता जुधाउँदैछन् ओली र माधव नेपाल ? Canada Nepal
किन कार्यकर्ता जुधाउँदैछन् ओली र माधव नेपाल ?
क्यानाडा नेपाल श्रावण ७ २०७८
काठमाडौं । नेकपा एमाले अहिले चरम आन्तरिक विवादको भड्खालोमा परेको छ । यो भड्खालोमा पर्नुको कारण संस्थापन केपी शर्मा ओली समूह र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।
पार्टीको विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आरोप–प्रत्यारोपसँगै प्रतिशोधपूर्ण प्रवृत्तिले संघीय सरकारको नेतृत्वबाट एमालेले हात धुनु परेको छ । नेपाल समूहको आत्मघातीको मतले कांग्रेसको पोल्टामा मुलुकको बागडोर परेको छ र सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेको प्रतिपक्षी आफ्नै नेताहरु बनेका थिए । अहिले प्रतिपक्षी दल हुँदा आफ्नै नेता सत्तारुढ बन्न खोज्दैछन् । यस्तो चरम राजनीतिक बिच्छृंखलताले एमाले कमजोर र निरीह बन्दै गएको छ ।
तर, नेतृत्वदायी स्थानमा रहेका नेताहरु पार्टीलाई एक बनाउनुभन्दा पनि एकअर्काविरुद्ध भौतिक रुपमै प्रतिवाद गर्ने रणनीति लिएको देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाल र ओली समूहकै २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिए । तत् पश्चात दुवै समूह एकअर्काविरुद्ध भौतिक रुपमै प्रतिवाद गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
संस्थापन ओली समूहले युवा संघलाई सक्रिय बनाउँदै आएका बेला फेरि युथ फोर्स ब्यूँताएर नेपाल समूहविरुद्ध लगाएको छ । युवा संघ र युथ फोर्सले नेता नेपालको पुत्ला दहनदेखि विभिन्न आरोप लगाएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
नेपाल समूहनिकट युवा संघ ओली समूहविरुद्ध नाराबाजी गर्दै ओली पुत्ला दहन गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा आठौँ महाधिवेशनले खारेज गरेको पीपुल्स भोलेन्टियर’ (पीभी) ब्यूँताएर नेपाल समूहले ओली समूहविरुद्ध कार्यकर्ता उतार्न खोजेको छ ।
बिहीबार नेता नेपालले पीभी ब्यूँताएको घोषणा गर्दैछन् । युथ फोर्सको सामना गर्न अखिल फोर्स गठन गरिसकेको नेपाल समूहले फेरि पीभी ब्यूँताएर सडकमा उतार्न खोजेको हो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्यकर्तालाई जुधाएर सडकमा बालेको आगो ताप्ने शीर्षनेताहरुको प्रवृत्ति अझै हराएको छैन ।
मुलुक र जनताका लागि शाहदत प्राप्त गरेका शहीदहरुको सपना पूरा गर्न र उनीहरुको परिवारको रेखदेख गर्न नसकेका राजनीतिक दलका नेताहरु कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर भिडाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
श्रावण ७, २०७८ बिहिवार १२:२५:२० बजे : प्रकाशित
वामदेव गौतम आफ्नै पार्टीमा रहेको एमालेको दाबी
काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट विभाजन भएपछि माधवकुमार नेपाल आफ्नो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बलियो बनाउनमा व्यस्त छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आउँदो चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउने दाबीसहित कार्यकर्ताहरु बढाउनेतर्फ लागेका छन् । तर एमाले विभाजनपछि यता न उता भएका नेता वामदेव गौतम भने अहिले चुप छन् । केही समयअघि उनले एमाले पार्टीबाट आफुले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
उनले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा जाने चर्चा पनि चलेको थियो । एमाले पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नभएका कारण उनी अझै एमालेमै रहेको मानिएको छ । उनले भने आफु अहिले कुनै पार्टिमा नरहेको बताउदै आएका छन् । शुक्रबार एमालेका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन उनलाई निम्तो दिइएको थियो ।
तर उनी बैठकमा सहभागी भएनन् । गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइनसकेको र निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा समेत गौतमको पद कायम रहेका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोलाइएको बारे एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ बताउछन् । एमालेले विधान महाधिवेशनमा भने गौतम सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ ।
यता एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी चयनमा गौतमको नाम नपरेपछि गौतमले राजीनामा फिर्ता लिने एमालेले दाबी गर्दै आएको छ ।
रामकुमारी झाँक्रीका कारण धेरै रुष्ट
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार १३:१८:०१ बजे : प्रकाशित
दल विभाजन अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
काठमाडौं - राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको रिटमा निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा उनले चलिरहेको संसद हतार हतार अन्त्य गरेर दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने, एमालेले सांसद पदबाट कारबाही गरिसकेका माधव नेपालसहित १४ जनालाई सनाखत गरेर गठन गरिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यता दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ ।न्युज कारखाना
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार १४:०८:१३ बजे : प्रकाशित